Sedimentary nkume: njirimara, mmalite na nguzobe | Network Meteorology
Dabere na mmalite na nguzobe ya, n’elu ụwa anyị enwere ebe dị iche iche ụdị nkume. Taa, anyị ga-ekwu maka ya sedimentary nkume. N'etiti usoro mbara ala dị iche iche a pụrụ ịmata, enwere ụdị okwute ndị a mejupụtara 75% nke elu ụwa. Ọ bụ ezie na pasent a yiri ka ọ dị oke elu, ha dị obere ma anyị na-atụnyere ha na oke egwu nke mejupụtara akụkụ ụwa. Uwe dum nke ụwa jikwa okwute dị egwu.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile, mbido na ịkpụpụta okwute sedimentary.
2 Formation nke sedimentary nkume
3 Ebe obibi nke uwa
4 Sedimentary nkume nke kọntinent nke ụwa
A na-akpọ ha dị ka nke a na nkume ndị a kpụrụ n'ihi nchịkọta nke ihe dịgasị iche iche nwere nha dịgasị iche na nke sitere n'aka ndị ọzọ nwere usoro okwute. A na-akpọ ihe niile mejupụtara nkume ahụ sed sedimeti. Nke a bụ ebe aha ya si. A na-ebugharị ihe ndị a site na mmiri ndị dị na mbara igwe dị ka mmiri, ice na ifufe. A na-ebugharị ihe ndị na-emepụta nkume ndị na-edozi ahụ site na ndị na-ahụ maka mmiri dị iche iche iji debe ha na ihe ndị a maara dịka efere mmiri.
Mgbe a na-ebufe sedimeti, a na-edozi ahụ okwute usoro dị iche iche nke anụ ahụ na nke kemịkalụ nke amara aha ya. Site na aha a anyị na-ezo aka na usoro nke ịmepụta nkume. Kacha nkịtị ihe bụ na sedimentary nkume na-guzobere n'akụkụ osimiri, ala nke oké osimiri, ọdọ mmiri, ọnụ nke osimiri na iyi ma ọ bụ ndagwurugwu. Dị ka ị nwere ike ịtụ anya ya, ịmepụta nkume ndị na-edozi ahụ na-ewere ihe karịrị ọtụtụ ijeri afọ. Ya mere, iji nyochaa mmalite na nguzobe nke sedimentary nkume, ọnụ ọgụgụ nke geological oge.
Formation nke sedimentary nkume
Iji nyochaa nhazi nke ụdị nkume a, ọ dị mkpa ịtụle na e nwere ụdị dị iche iche nke usoro usoro mpụga nke mpụga. Otu n'ime usoro nke kachasị emetụta mbugharị nkume bụ ifufe. Usoro ihe omumu nke ala na nke mbu bu ihe kpatara ihu igwe na igbusi okwute ndi di na mbu. Weathering bụ ihe ọ bụla karịrị a usoro nke mejupụtara mbụ nkume na-agbasa n'ime ndị ọzọ obere iberibe. N'aka nke ọzọ, mbuze bụ ihe ọzọ karịa iyi akwa na mgbaji na-esochi ha n'ime obere ihe. The ahụ na ha na-emebi emebi ma na-ekpuchi ihu igwe site na aha nke ụdọ ma ọ bụ irighiri ihe. Ka anyi ghara ichefu na mmiri bukwa ndi m na-eso nke na egosiputa onwe ha site na mmiri-ozuzo dika ikuku.
Obere okwute pere mpe nke e mepụtara site na ihu igwe ma ọ bụ mbuze bụ ndị ọrụ ndị ọzọ na-ebufe. Ozugbo ebugoro ha n'okporo uzo di nkpa, ihe ndia nile na-edina n'ime efere ahihia. N'ime ihe ndekọ ndị a niile, ihe niile na-eme ka mmiri gwụchaa nke nta nke nta. Zọ site na clasts na bezin ahụ dabere na nha ha. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, obere sedimenti ndị ahụ ga-agarịrị njem ka ukwuu ruo mgbe ha ga-anọrịrị ebe obibi ha n’akụkụ mmiri ahụ. N'aka nke ọzọ, a ga-eburu n'uche ụdị ịdọkpụrụ na njem nke dị dabere na oke nke sedimenti ahụ.
Ozugbo ha biri na bekee, ha na-amalite usoro a maara dịka sedimenti. Ọ bụkwa na usoro a ga-ahụ maka gburugburu ebe obibi na nsonye nke ihe ndị ọzọ. Ọtụtụ ihe ndị dị ndụ, ma anụmanụ ma ihe ọkụkụ, nwere ike iso mee ka e nwee nkume sedimentary. N’okwu a, anyị na-ekwu maka ọnụnọ fosilili. A na-akpụ nkume ndị ọzọ nke sedimentary site na nrụgide nke sedimenti ahụ na-arụrịta ibe ha. Nrụgide a, ihe karịrị ọtụtụ ijeri afọ, na-akpata usoro ịkpụzi ciment na-akwụsị iji mepụta nkume sedimenti.
Ebe obibi nke uwa
Anyị ga-ahụ ihe dị iche iche sedimenti gburugburu nke dị na mpaghara kọntinent na nke na-eme ka e guzobe nkume sedimentary. Otu akụkụ kachasị mkpa na ịmepụta nkume ndị a jikọtara ya na gburugburu ebe a na-emepụta ya. Thedị iche nke clasts na irighiri ihe na-adabere na gburugburu ebe a hụrụ ha na njirimara kemịkal ha. Ọ bụ nhazi ọkwa sara mbara ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ gburugburu ebe obibi, ma kọntinent ma nke mmiri.
Ka anyị hụ ihe dị iche iche continental sedimentary gburugburu bụ:
Glacier: ọ bụ gburugburu ebe sedimenti na-ewere ọnọdụ site na nkwụnye ego nke glaciers hapụrụ. N'ebe a, irighiri ahihia sitere na igwe ihu igwe nke igwe site na mgbanwe nke okpomoku na ntu oyi na igba oku. The clasts ewetara angular atụmatụ na obere ọnụnọ nke organic okwu. Sediment na-apụtakarị enweghị nchịkwa.
Ọzara: Ọnọdụ ndị a na-edozi ahụ na-eme ka ụrọ ndị a kpụrụ site na ihu igwe na-arụ ọrụ iji họrọ ahịhịa na usoro dị ka dunes na-apụta site na ájá dị ihe dịka 4 mm.
Sedimentary nkume nke kọntinent nke ụwa
Anyị ga-ahụ ihe bụ mpaghara kọntinentị enwere ike ịkekọrịta dịka ogo nke stratification nke nkume guzobere ebe a dị:
Onye na-akwado ọkụ: ha bụ mmiri iyi na iyi ebe ọ na-agbanwe na mkpọda ugwu. A na-ahụkarị ha na ụkwụ ugwu na ihe nkwụnye ego ndị nwere ụdị nke mbụ.
Osimiri: osimiri na-ebu ngwugwu niile sitere na ihu igwe igwe. N'ebe a, site na mmiri nke mmiri ugbu a, ụrọ na-emepụta nkume ndị na-edozi ahụ:
Lacustrine na ala ala: etịbe na ala ọdọ mmiri na apịtị. N'ebe a, irighiri ahihia na-achikota ma jiri otutu ihe mejuputara.
Albufera: ọ bụ ebe a na-edebe ájá na ọmarịcha nke na-abata n’ọwa mmiri.
Ndị Delta: bụ ndị na-eme na gburugburu fluvial na swampy gburugburu. A na-esi na ụyọkọ mara mma ma mara mma na-emepụta okwute.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụdị nkume sedimentary dị adị dabere na mmalite ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Sedimentary nkume